ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: သံဖြူကျောင်း (၆) ကြိမ်မြောက် ယဉ်ကျေးလိမ္မာတရားစခန်း
သံဖြူကျောင်း (၆) ကြိမ်မြောက် ယဉ်ကျေးလိမ္မာတရားစခန်း
သံဖြူကျောင်းဆရာတော် အရှင်အာစာရ (ဓမ္မဒူတ)
ဧရာဝတီတိုင်း ၊ ပုသိမ်မြို့နယ် ၊ ပုသိမ်မြို့ ရ.ယ.က (၁၀) နယ်မြေ ၊ပိတောက်ချောင်းရပ် သံဖြူကျောင်း ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် တွင် (၆) ကြိမ်မြောက် ကလေးများ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်တန်းတရားစခန်းကို သံဖြူကျောင်းဆရာတော် အရှင်အာစာရ (ဓမ္မဒူတ) မှ ဦးစီး၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၄) ရက်နေ့မှ (၆) ရက်နေ့ ထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဆရာများအဖြစ်၊ သံဖြူကျောင်းဆရာတော် နှင့် ရေကျော်ကျေးရွာအုပ်စု အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းမှ ဆရာဆရာမများ ဦးစီးသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
သင်တန်းသားများအဖြစ် ကျောင်းသား/သူ စုစုပေါင်း ၃၈၀ကျော်တက်ရောက်ကြပြီး၊ သင်တန်းပို့ချရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်များကတော့-
-ကလေးသူငယ်များ ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိပြီး ၊ မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်စစ်များ ဖြစ်နိုင်ကြစေရန်
- အသိအလိမ္မာတိုးပွားကြစေရန် လည်းကောင်း
-ဘုရား၊တရား၊ သံဃာ၊ ဆရာ၊ မိဘနှင့် သက်ကြီးဝါကြီးများ အပေါ်၌ ရိုသေလေးစားဂါရ၀တရား ထားနိုင်ကြစေရန် လည်းကောင်း ရည်ရွယ်၍
ယနေ့လူငယ်၊နောင်ဝယ်လူကြီး ဖြစ်လာမည့် ဖယောင်းသားနှယ်ကလေးငယ်များအား “ယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်တန်းများကို” ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ သံဖြူကျောင်းဆရာတော် အရှင်အာစာရ (ဓမ္မဒူတ) မှ ဦးစီး ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။
(၁) အားကစားနှင့် ကာယပညာ
ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ရက်နေ့သင်တန်း စတင်ချိန်မှာတော့ ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများရဲ သင်တန်း ကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ၊ ပျော်ရွင်စွာနဲ့ လိုက်နာသင်ယူကြတာကို ၀မ်းသာပီတိဖြစ်ဖွယ် တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆရာတော်နှင့်တကွ ဆရာဆရာမများက လည်း ကလေးငယ်များအပေါ် စေတနာ အင်အားကြီးမားစွားနှင့်သင်ကြားပေးနေကြပါတယ်. . .
သံဖြူကျောင်းတွင် ကလေးများယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းတရား စခန်းများသာမက လူကြီးတရားစခန်းများ ကိုလည်း နှစ်စဉ်ကျင်းပ ပေးလျှက်ရှိပါသည်.. . .
သံဖြူကျောင်း ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် လူငယ်ပညာသင်ကြားရေး ပရဟိတဂေဟာကျောင်းတွင် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များကို မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းမှ စပြီး တက္ကသိုလ် ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား ကလေး (၅၆)ဦးနှင့် နေ့တက်ညပြန် ကျောင်းသား /သူ (၂၅) ဦးတို့အား အထိ စုစုပေါင်း ကလေး (၈၁) ဦးကို ပပညာသင်ကြားစေလျှက်ရှိပါသည်။ ကျွန်မတို့အဖွဲ့သားများကလည်း ကလေးများကို Vicee နှင့် Decolgen ဆေးများကို ဝေပေးခဲ့ပါတယ်.
ဆရာတော်မှ "ဂရုဏာထား၊ မေတ္တာပွား၊ စိတ်ထားဖြူစွ၊ ပရဟိတ" ဟူသောခံယူချက် ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ လက်ကိုင်ထားပြီး ကျောင်းတိုက်ကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ၊ စာသင်သား ရဟန်းသာမဏေများ ပြည့်စုံစွာဖြင့် ငယ်၊လတ်၊ကြိး ဓမ္မာစရိယ စာပေများ သင်ကြားနိုင်အောင်၊ ကျောင်းသား/သူများ ထက်၊လယ်၊မူပညာသာမက တက္ကသိုလ်ပညာများပါ ခံယူချက်ရှိရှိ ကြိုးစားအားထားစွာ သင်ကြားနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
ယဉ်ကျေးလိမ္မာကလေးသင်တန်း၊ လူကြီးတရားစခန်းပွဲများနှင့် သံဖြူကျောင်း ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကြီးသို့ ကျောင်းစရိတ် ၊ စားစရိတ်နှင့် လိုအပ်သော အထွေထွေစရိတ်များကိုလည်း အလှူငွေများဖြင့် လှူဒါန်းပံ့ပိုးနိုင်ပါသည်. .
ဆက်သွယ်လှူဒါန်းလိုပါက လိပ်စာအပြည့်အစုံမှာ. . ပဓာန နာယက ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ “အာစာရ” (ဓမ္မစရိယ) သံဖြူကျောင်း လူငယ်ပရဟိတ စာသင်တိုက် ရ.ယ.က( ၁၀) ၊ ပိတောက်ချောင်း၊ ပုသိမ်မြို့။ ဖုန်းနံပတ် 042-25841 နှင့် 09-8569329 များသို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
“ကလေး ကလေး အထင်မသေးနဲ့”
ရေးသားသူ may16 at Friday, February 04, 2011
မိုးယံ February 5, 2011 at 9:37 PM
၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓု ခေါ်ဆိုပါသည်။ သာဓု သာဓု သာဓု
တစ်ချိန်မှာ ကိုယ်တိုင်ဝင်ဦးစီးနိုင်အောင် အားခဲထားတယ်..
မောင်ကောင်း February 5, 2011 at 10:26 PM